संसारकै5डरलाग्दो रहस्यमय टापू (भिडियो सहित) – MediaNP
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०००:३०0
आज हामी तपाईलाई खतरनाक ठाउँको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं । यहाँको ठाउँमा डरलाग्दोे र निकै अजिव जनावर अनि त्यहाँ बसोबासगर्ने मानिसको कारणले गर्दा त्यस ठाउँमा जानको लागी पनि कल्पना गर्न सकिदैन् ।
यस्तो खतरनाक ठाउँको बारेमा तपाईले अहिल्यै सम्म सुन्नु भएको छैन् होला । संसारमा यस्तो खतनाक ठाउँ छ कि जसलाई कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैनन् । जो व्यक्ति यस्तो ठाउँमा जान खोज्छ, त्यो मानिस फर्केर आउँछ भनेर अलिकति पनि सोच्न सकिदैन्
नुका हिवा जगंलमा मानिसह? बसोबास गर्ने कारणले गर्दा त्यहाँ जाने त्यहाँको जगंली जनावरसगँ डराउनु पदैन् । मानिसको बसोबास रहेको कारणले गर्दा त्यहाँ जगंली जनावर पनि खासैं पाइदैन् । त्यस जगंलमा बस्ने मानिसले जगंली जनावर भन्दा पनि डरलाग्दा रहेका छन् ।
एक दिन जर्मनका टुरिस्ट त्यस जगंलमा गएका थिए र जंगलैमा एक्कासी उनी गायब भए । उनले लगाएको कपडा, जुत्ता भने त्यहि भेटियो । जुन कपडा मानिसले सजिलैसगँ फुकाएको जस्तो देखिन्थो । एक रिर्सचको अनुसार त्यहाँ रहेका मानिसह?ले नै उनलाई खाएको हुनसक्ने बताए ।
२ राम्री आइल्याण्ड
राम्री आइल्याण्डलको एक ठाउँलाई निकै खतरनाक मानिन्छ । त्यहाँ जाने व्यक्ति जिउँदो फर्कन निकै सक्दैनन् । त्यस ठाउँमा जान नसकिने कारण भनेको के हो भने त्यहाँ निकै डरलाग्दो माछा । माछाले सजिलैसगँ मानिसलाई घाइते बनाएर रगत चुसेर खाई मार्ने गर्दछ ।सबैभन्दा पहिले जापानका १ हजार सैनिकह? ब्रिटिस सेनासगँ बच्नको लागी त्यहाँ गएका थिए । सेनालाई त्यँहा पाइने माछाले निकै दुख दिई आफ्नो भोजन बनाएको थियो ।
३. मक्की आइसल्याड
मक्की आइसल्याड सन् १९३८ मा बादरको साथमा एक इक्सपेरिमेन्ट गरिएको थियो । यसरी इक्सपेरिमेन्ट गर्दा त्यहाँका बादरको नेचरमा निकै परिवर्तनको साथमा निकै डरलाग्दो भएको थिए । त्यसको कारणले गर्दा त्यहाँ जानको लागी प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
स्नके आइल्याड निकै डरलाग्दो ठाउँ हो । यस ठाउँमा धेरैनै डरलाग्दो सापह? रहेका छन् । सर्पको कुरा गर्दा तपाईलाई अलिअलि मात्र होला भन्ने लाग्न सक्छ , तर त्यहाँ छ्याप छयपत्ति सर्प छ । तपाई जहाँ हेर्नुहुन्छ त्यहाँ सर्पनै सर्प मात्र छ । तपाई उक्त ठाउँमा जानु भयो भने उमक्न सक्नुहुन्न् ।
५. हियरस् आइसल्याडस् ।
हियरस् आइसल्याडस्मा तपाईले नेचरसगँ जोडिएको डरलाग्दो चिजह? देख्न सक्नुहुन्छ । यहाँ हिउँले ढाकेको पहाडलाई पनि सजिलैसगँ अवलोकन गर्न सकिनेछ । निकै डरलाग्दो ज्वालामुखी बिस्फोटन हुने र साहै डरलाग्दो जनावर भएको कारणले गर्दा यहाँ जान कल्पना पनि गर्न सकिदैन् । यहाँ जाने व्यक्तिको केहि घण्टामै मुत्यु हुन्छ ।
0 thoughts on “संसारकै5डरलाग्दो रहस्यमय टापू (भिडियो सहित)”
writingaessay North Carolina State University https://essayerudite.com/do-my-homework/ Blake Bates Baytown